एक लाख बनाउन सपना जो adventurous मान्छे को लागि लाभदायक गतिविधि - धमकी दिन को सामग्री!
धेरै enterprising मान्छे आज धमकी दिन प्रकार गर्न थाले। यी चराहरूको अन्डा किनभने यसको उपयोगिता को बजार मा ठूलो मांग गर्दै छन् यस व्यापार, धेरै लाभदायक छ। यो पनि अपेक्षाकृत हालै domesticated चरा मानिन्छ कि अति उपयोगी र स्वादिष्ट मासु छ।
यसबाहेक, धमकी दिन को सामग्री - यो कुखुरा परिचित निम्ति त गाह्रो छ। र यो आर्थिक भन्दा, उदाहरणका लागि, अझ लाभप्रद छ प्रजनन hens।
सबैभन्दा लाभदायक quails पालन र प्रजनन जापानी नस्ल छ। एक स्त्री को 300 टुक्रा सम्म - यो नस्ल अन्डा को सबै भन्दा ठूलो संख्या एक वर्ष दिन्छ। साथै, जापानी धमकी दिन सबै भन्दा ठूलो अन्डा दर्ता।
यसलाई कैद तिनीहरूले डेढ महिना को उमेर मा बोल्ट सुरु कि थप कुखुरा र तथ्यलाई देखि "जापानी महिला" distinguishes। कुखुरा पनि लगभग वर्ष बढ्न आवश्यक र होस्टहरूको अघि आधा आफ्नो अन्डा दिन हुनेछ। र ostriches र दुई वा तीन वर्ष मा अन्डा बिछाउने सुरु गरे!
"वोट" जवान को एक उच्च प्रतिशत hatchability र प्रतिरोध विभिन्न रोगहरु रूपमा धमकी दिन सामग्रीको लागि। र एक ब्रीडर बन्न थप मद्दत धमकी दिन गोबर, बगैचा बिरुवाहरु लागि एक उत्कृष्ट मल छ।
तर, यो चरा, यसको सबै लाभ बाहेक, आफ्नो कमियां छ। यो उनको बरु कम "बुद्धि" र fearfulness, र उच्च thermophilic छ। त्यसैले, तिनीहरूले "मिनी-hens" मा बास हुनेछ जहाँ aviary, राम्रो गरम हुनु पर्छ।
साथै, हेरविचार धमकी दिन एक हप्ता कम्तिमा एक पटक "स्नान दिन" व्यवस्था गर्न लग्नु गर्नुपर्छ। को पाठ्यक्रम, पानी र साबुन वा स्याम्पु संग चरा धुन आवश्यक छैन। बस नदी बालुवा वा बालुवा र काठ खरानी को एक मिश्रण संग कक्षहरू प्रतिरोधी कचौरा मा राखे। सबैभन्दा सुविधाजनक को "स्नान"4सेमी भर्न गर्नुपर्छ लागि 8 सेमी पर्खालहरु संग सम्प थियो। सब्सट्रेट।
को "चरा स्नान" वरिपरि छरिएका छैन समयमा बालुवा गर्न, तपाईं तिनीहरूलाई "स्नान कोठा" पूर्व-प्रविष्टि बनाउन, सब्सट्रेट शीर्ष बक्स वा दराज संग कन्टेनर कवर गर्न सक्नुहुन्छ।
धमकी दिन को सामग्री पनि कक्षहरूको शुद्धता अनुपालनको लागि प्रदान गर्दछ। यो बाडे को तलामा सिफारिस गरिएको छ बालुवा खन्याउन वा भारी कागज राख्नु। किनभने फोहर फाल्न मात्र होइन एक अप्रिय गन्ध, तर मानव स्वास्थ्य र ग्याँस चरा पनि हानिकारक जोड बिस्तर, दैनिक परिवर्तन गर्नुपर्छ। र अक्सर गुँड छैनन्, र भुइँमा अन्डा perepolochki।
कम्तिमा हप्तामा एक, कक्षहरू को चरा "सामान्य सफाई" को लागि अन्य स्थानहरूमा osvodbozhdaya चरा घर गर्दै छन्। "अपार्टमेन्ट" धमकी दिन मात्र एक ब्रश संग राम्ररी धोएर गर्न आवश्यक छ, तर पनि जला दिन गर्न।
कुखुरा विपरीत, चरा क्यालिफोर्निया रक को अपवाद संग perches आवश्यक छैन। त्यसैले, तपाईं quails लागि cages प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ के बोल्ने, यो उपयुक्त ध्यान दिनुहोस् छ: तपाईं कुनै पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ती पनि चरा लागि मात्र होइन तर पनि मुसा वा खरायो लागि हो कि।
खैर, यो तपाईं आवश्यक स्वच्छता पालन भने, पाठ्यक्रम शहरी अपार्टमेन्ट मा quails समावेश गर्न सम्भव छ। तर, यो किनभने प्रत्यक्ष सूर्यका मा धमकी दिन लामो बसाई अन्डा वा प्रत्येक अन्य rasklovyvaniyu तिनीहरूलाई गराउँछ, एक विन्डो देहली वा बरामदा मा कक्षहरू राख्न इन्कार गर्नुपर्छ। तापमान भेरिएसनहरूमा पनि चरा को स्वास्थ्य राम्रो तरिका छैन असर गर्छ।
धमकी दिन चाँडै प्रत्येक अन्य संलग्न एकाकीपनको, रुचि छैन। तसर्थ, चरा गृह बिरही छैन भनेर, ती पहिले नै प्रत्येक अन्य संग "मित्र" साझेदारी छैन।
एक पिंजरे मा धमकी दिन को एक एकदम ठूलो संख्या समायोजित गर्न सक्छन्। प्रति वर्ग मीटर राम्रो अन्डा उत्पादन लागि 120 व्यक्तिहरूलाई सम्म राखिएको हुनुपर्छ। 3-5 को महिलाहरुको स्राव एक पुरुष - यो अन्डा उत्पादन बढ्छ र सबै अन्डा fertilized गरिने एक ग्यारेन्टी दिन्छ।
धमकी दिन बढी सामग्री दैनिक हल्का अवधि अठार घन्टा आवश्यकता छ। हाम्रो क्षेत्र, तपाईंले गरेर यो हासिल गर्न सक्नुहुन्छ कृत्रिम प्रकाश। यसलाई यी उद्देश्यका लागि उपयुक्त छ फ्लोरोसेन्ट दीपक। एक सानो बुरा प्रभाव पारंपरिक प्रकाश बल्ब प्राप्त छ।
यो कोठा जहाँ प्रत्यक्ष धमकी दिन मा पनि खातामा चिस्यान लिनुपर्छ। यो 50 देखि 70 प्रतिशत हुनुपर्छ। चरा को पक्षति भंगुर हुन्छ भने र आफूलाई अक्सर धमकी दिन disheveled र खुला चुच्चो बस्न, त्यसपछि तुरुन्तै तल्ला कोठा मा, धुन पानी चरा बर्तन र बाल्टिन संग आसपास कक्षहरू व्यवस्था, को पर्दे मा पानी स्प्रे। यसरी यो चिस्यान वृद्धि गर्न सम्भव छ।
तर बिर्सन छैन: को धमकी दिन राम्रो र चिस्यान हस्तान्तरण गर्दैन। त्यसैले यसलाई यहाँ ज्यादा छैन धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
धमकी दिन खुवाउने सही रुचाउने कुखुरा देखि एक सानो फरक छ। को hens एक दिन दुई पटक पर्याप्त खाना दिन गर्दा, धमकी दिन एक "खाने" 3-4 एक मा एक दिन समय, र नै समय चाहिन्छ।
घरेलु पनिर, माछा वा जमीन बीफ: अन्न घटक देखि अलग, तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण कच्चा प्रोटीन छन्। तसर्थ, सामान्य avian मिश्रित चारा प्रति दिन2प्रति टाउको ग्राम को दर मा प्रोटिन ठूलो थपियो गर्नुपर्छ। चोट अन्न मिश्रण को सजिलो को लागि प्रोटिनको 12 ग्राम थपिएको छ।
हामी भिटामिन पूरक बारेमा बिर्सनु हुँदैन। फार्मेसी भिटामिन बाहेक, यस उद्देश्य grated गाजर र कटा साग लागि पूर्ण छन्।
चरा अन्य प्रकार जस्तै धमकी दिन रोडा र pounded खोल आवश्यकता हो, तपाईं लगातार छुट्टै कचौरा मा खन्याउन गर्न आवश्यक छ। तपाईं पनि सुकेको razmelchonnuyu eggshells प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
जीवनको पहिलो हप्ता समयमा turkeys खुवाउने
होटल Anyavee Railay Resort3* (थाईल्याण्ड, क्राबी): वर्णन, यात्री समीक्षा
एक कठिन विकल्प: एक मोडेम सबै भन्दा राम्रो छ?
साइट लेआउट - कुनै पनि निर्माण को शुरुवात।